Okwuntughe: Ntugharị Mkpokọta SMS | Martech Zone
Satọde, Satọdee 6, 2008 Sunday, December 14, 2014 Douglas Karr
May nwere ike ịchọpụta na m nọrọ jụụ n'izu gara aga. Ọ bụghị site na enweghị ọrụ, enweela m nke ọma izu ike ọrụ!
Otu n'ime ọrụ m na-arụ ọrụ n'izu a bụ WordPress Plugin nke na-enye ohere SMS mwekota na Ekwentị mkpanaka. Ihe mgbakwunye ahụ siri ike, yana njikwa nhazi yana interface onye edemede. Njikwa nlekọta na-enye gị ohere ijikwa atụmatụ njikọta. Ihe edere n’edetu gha enyere gi aka tinye ndi debanyere aha ma zipụ ndi debanyere aha gi.
Njikọ Nhazi Njikọ Ekwentị:
Naanị nchịkwa nchịkwa nchịkwa
Denye aha na ihe (maka onye nwe blọgụ). Na-akpaghị aka na-ewepu Akismet họpụtara spam!
Blog post alerts (iji gwa ndị debanyere aha gị mgbe post bipụtara, dakọtara na WordPress 2.6.1+)
Formdị iji aka tinye onye debanyere aha.
Nweta onu ogugu ndi debanyere aha.
Ntughari Ntanetị Ntanetị:
Ode akwukwo ma obu uzo di elu
Zipu ozi ederede ohuru nye ndi debanyere aha gi
Mkpebi a URL (iji bụ.gd) na ịchọrọ itinye na ozi ederede gị
Iji aka tinye onye debanyere aha.
Ekwentị mkpanaka nwere nnọọ siri ike API mụ na Adam na-arụkọ ọrụ n’ebe ahụ maka ezi-na-akụ na ngwa mgbakwunye na ịzụlite a oké mwekota. WordPress etolitela ntakịrị afọ gara aga ma ejiri ya maka ọtụtụ ojiji, gụnyere ecommerce, ozi nkwado ndị ahịa, njikwa ihe omume, wdg. dinggbakwunye ikike ịdebanye aha na SMS bụ ezigbo mma.
Anyị na-aga ịnwale ya na blọọgụ m! Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ngwa mgbakwunye na ọrụ ahụ, ịnwere ike ijikọ Adam na weebụsaịtị ha. Jide n'aka na ị banyere blọọgụ m, anyị na-arụ ọrụ na iwepụta ego maka ndị na - agụ akwụkwọ m. Ọ ga-amasị anyị ịgbakwunye ndị na-ede blọgụ ole na ole (ọrụ ejedebeghị na US maka ugbu a) nke ga-enye ọrụ mgbatị ahụ.
Ọrụ a jikọtara nke ọma na ndị na-ebu ya niile, chọrọ nhọrọ nbanye na nwepu aha abụọ. Can nwere ike ịpụ-na site na ide ozi n'ekwe ntị UchechiLOG na 71813. Nwere ike ịpụ apụ site n’ide ozi n’ekwe ntị Kwụsị MartechLOG na 71813.
IHE: Anyị anaghị akwụ ụgwọ maka ebubo na onye na-ebu gị nwere ike ịgba gị ụgwọ maka ozi ederede ma ọ bụ ụgwọ data metụtara ha! Nke a bụ kpam kpam beta ugbu a (ị kwesịrị ịdebanye aha ya mgbe ọ na-adọta maka ihe niile SPAM kwuru!).
Tags: SMS ngwa ngwawordpress sms mwekotawordpress sms ngwa mgbakwunye
Sep 6, 2008 na 9:07 PM
Nke a dị egwu maka obere azụmaahịa mpaghara. Na-atụ anya ịnụ otu esi enweta ya na ụlọ ahịa kọfị. Na mbụ na-eche na ọ ga-adị mma maka ịnwe onye nlekọta ha na-ejikwa okwu mgbe ị na-agagharị ma echiche gị na-ewe ya nke ọma.
Ọkt 3, 2008 na 9:44 PM
Ndewo, nke a na-ada ihe na-atọ ụtọ! Enwere njikọ njikọta ebe ọ bụla?
Ọkt 4, 2008 na 3:45 PM
Ihe mgbakwunye ahụ chọrọ akaụntụ na Ekwentị mkpanaka. Nwere ike ịkpọtụrụ ha ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịme anyị ụfọdụ nnwale, anyị agbakwunyela nhọrọ 'kwa post' na ngwa mgbakwunye n'oge na-adịbeghị anya! 3.2.dị nke XNUMX apụla ugbu a.
Mee 3, 2016 na 9: 56 AM
Ọ ga-ekwe omume na-agbanwe WP ndebanye / paswọọdụ iweghachi usoro si email / paswọọdụ na ekwentị / OTP-paswọọdụ (zitere sms)?
Mee 3, 2016 na 10: 23 AM
Ekwenyesiri m ike na e nwere ọrụ ndị na-enye nke ahụ. Amaara m na enwere ezigbo ngwa nyocha sitere na Google nke na-enye ohere ngwa na koodu.